Xaafado ka tirsan magalada baladweyn Oo ku go,doomay dadka qaar ka mid ah - Awdinle Online
Xaafado ka tirsan magalada baladweyn Oo ku go,doomay dadka qaar ka mid ah
October 29, 2019 (AO) – Magaalada Baladweyne Xaafadaha qaar ayaa waxaa xilligaan ku go’doonsan dad farabadan oo uu saameeyey fatahaada Wabiga Shabeelle,kuwaas oo xaafadahooda kasoo bixi waayey.
Inta badan Xaafadaha Magaalada Baladweyne ayaa waxa buux dhaafiyey Byaha kasoo baxay Wabiga ee fatahaada ah,waxaana taasi ay sababtay in dadka qaarkood ay Magaalada ka bixi waayaan.
Dadka ku sugan Magaalada Baladweyne ayaa waxaa ay sheegen in dad badan ay la soo xiriireen kuwaas oo ku go’doonsan Xaafadaha qaar ee Baladweyne,kuwaas oo u baahan in la badbaadiyo,hayeeshee aysan jirin cid u gurmatay.
Hal doon oo kaliya ayaa la sheegay inay gurmad kala duwan ka wado Baladweyne,taas oo inta badan ay xiligaan raadineyso dadkii ay doonta la rogmatay halka doomankii kale ay ciladoobeen.
Gebi ahaan waxaa xiran Isbitaalka guud ee Magaalada Baladweyne,waxaana muuqaalo laga soo duubay ay muujinayeen Isbitaalka oo Biyo farabadan ay dhex-jiifaan,isla markaana dadka waxyeelada soo gaarto aysan heysan meel lagu daweeyo.
Dhanka kale Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay tagaan Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Wafdiga ayaa waxaa sidoo kale qeyb ka ah xubnaha Guddiga fatahaadaha Hir-Shabeelle ee uu dhawaan Magacaabey Madaxweyne Waare,waxaana ay halkaasi u tagayaan ka jawaabida musiibadii shalay ka dhacday Magaalada Baladweyne oo aheyd doontii la qalibantay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Hir-Shabeelle iyo dad Shacab ah.
Garoonka Diyaaradaha Magaalada Baladweyne ayaa dhawaan xirmay,kadib markii uu saameeyey roobkii dhawaan halkaasi ka da’ay,waxana la ogeyn halka uu ku degi doono.
Xaalada Magaalada Baladweyne ayaa xilligaan ah mid aan wanaagsaneyn,waxana inta badan ka barakacay dadkii deganaa,kuwaas oo haatan dhibaatooyin kala duwna ayu ku heystaan deegaanka Ceel-jaalle oo ah duleedka Koonfureed ee Magaalada Baladweyne.
Previous articleXOG: Maxaa iska ka bedalay mowqifkii AhluSuna wal jamaaca ee mamul u samaynta galmudug
Next articleCadeymo: Ahlu-sunna oo soo bandhigtay Heshiiskii ay la gashay Dowladda Federaalka